Eyequant: Fampitana hafanana an-dalambe | Martech Zone
Eyequant: Fanamafisana an-tsary ny sidina
Talata, May 15, 2012 Asabotsy Jolay 8, 2017 Douglas Karr
EyeQuant dia maodely fandinihana maso mialoha izay mijery manokana izay hitan'ny mpampiasa amin'ny pejy ao anatin'ny 3-5 segondra voalohany. Tsotra ny hevitra: ao anatin'ny 5 segondra dia tokony ho hitan'ny mpampiasa hoe iza ianao, inona ny volavola omenao ary inona no hatao manaraka. EyeQuant dia mamela ny fanatsarana ny famolavolana pejy iray hahazoana antoka fa izany no izy.
Ireto ny valiny maimaim-poana amin'ny fampisehoana demo EyeQuant… Faly be aho fa any no apetraka ao amin'ny pejin-tranontsika ny sain'ny olona!
Ny mampisaraka ny EyeQuant amin'ny serivisy hafa dia ny faharetana minitra vitsy monja hahazoana ny valiny. Ny valiny dia tonga tamin'ny sari-tany 3 ihany koa:
The sarintany fiheverana mampiseho izay faritra amin'ny pikantsarinao mahazo ny tena, salasalany na kely indrindra. Ny faritra mahasarika maso indrindra dia miloko mena mena, ny faritra antonony dia mavo manamarika, ny faritra malemy indrindra amin'ny pikantsary dia hiseho miloko maitso sy manga. Ny faritra mangarahara dia tsy mitarika fiheverana mihitsy.
The sarintany fahitana manome ny topy maso haingana ny tanjaky ny sain'ny pejin-tranonkalanao: mampiseho izany indray mipi-maso izay ho hitan'ny mpampiasa mandritra ny 3 segondra voalohany nitsidihan'izy ireo. Miorina amin'ny fikajiana ny fahitana ambony indrindra amin'ny fahitana sy ny halavirana eo anelanelan'ny efijery, ny faritra mangarahara amin'ny sarintany fahitana dia ireo hitan'ny mpampiasa anao ao anatin'ity dingana orientation tena lehibe ity.
The Faritra mahaliana endri-javatra dia manome ny valiny amin'ny antsipiriany indrindra an'ny EyeQuant. Manampy anao hamaritra faritra 10 amin'ny pikantsarinao, izay hikajian'ny EyeQuant sanda isan-jato, ohatra: + 45% na -23%. Ny sanda dia manondro ny habetsaky ny faritra hita maso (na latsaka) ampitahaina amin'ny salanisan'ny pikantsary.
Ny vidin'ny serivisy dia tsara, miaraka amin'ny famakafakana 5 amin'ny $ 199 / mo US na 50 amin'ny $ 449. Misy ihany koa ny vidin'ny orinasa ary misy ny interface amin'ny alemana sy anglisy. EyeQuant koa dia manana API ary misy fonosana mpivarotra!
Tags: sarintany fifantohanaheatmapheatmappingsarintany fahitana
Ireo manam-pahaizana momba ny marketing anatiny izay hianaranao amin'ny Internet
May 15, 2012 ao amin'ny 6: 30 PM
EyeQuant mpiara-manorina eto. Misaotra tamin'ny antsoantso Douglas! Vao fiandohana ihany ity ary manana *betsaka* tena mahafinaritra tokoa ny EyeQuant ho an'ny 2012. Raha manana fanontaniana na fanehoan-kevitra ianao na ny mpamaky anao dia tiako ny hihaino anao amin'ny alàlan'ny fabian ao amin'ny eyequant dot com.